eNasha.com - लौ अचम्म ! विज्ञापन पो !
लौ अचम्म ! विज्ञापन पो !
सामान्यतया इनशाडटकममा समाचार हाल्न कलाकारहरु धाउँछन् वा यसो भनुँ कलाकारकहाँ हामी धाउँछौँ । मेरो इमेलमा अफिसको पहिलो घण्टामा नै एउटा इमेल टुप्लुक्क देखापर्‍यो । यो व्यापारिक उत्पादनले इनशाडटकममाथि आँखा लगाएको देखेर मलाई पनि रमाइलो लाग्यो, आखिरमा यो के रहेछ त ?
तर विज्ञप्ति पढेर मलाई के लाग्यो भने, यो विज्ञापन कम र रोमान्टिक लेखोट ज्यादा रहेछ ! जसको केही अंश पढिहाल्नुस्- यो नयाँ अभियानको मूख्य निचोड भनेको "रोमान्स" हो र यसमा प्रयोग भएको स्लोगनको निचोडले पनि सोही कुरालाई दर्शाएको छ । फ्रेसनेसको रोमान्टिक लहर स्लोगन राखिएको यस अभियानमा फ्रेसो क्याण्डीलाई ताजा साससँग जोडिएको छ । फ्रेसोले ताजा सास फैलाउँदछ, ताजा सासले सजिलैसँग कन्फिडेन्सलाई बढाउँदछ,। प्रमुख रुपमा युवा युवतीहरुलाई लक्ष्य गरी तयार गरिएको टेलिभिजन विज्ञापनले रोमान्टिकतालाई नै प्रमुख आधार बनाएको छ । मीठो चुम्बनले पनि सधै ताजा सासलाई नै प्रतिविम्बित गर्दछ ।
टेलिभिजन विज्ञापनले विभिन्नु उमेरका युगल जोडीहरुलाई रोमान्टिक अवस्थामा देखाएको छ । जव युगल जोडीहरु किस गर्न खोज्दछन् तब उनीहरुको ओठ र गालाको बीचबाट प्रेम चिन्ह निस्कन्छ । वास्तवमा त्यो प्रेमको चिन्ह फ्रेसो क्याण्डीबाट निस्केको हुन्छ । फ्रेसोले शाश्वत प्रेममा थप फ्रेसनेस ल्याउँदछ । मेलोडियस संगीतको समायोजनले थप रौनकता थपेको छ र यही कुरालाई प्रेस तथा विद्युतीय माध्यममा अत्यन्त सशक्त ढंगले प्रस्तुत समेत गरिएको छ ।
खासमा जयाया कन्फेक्सनरी- क्रेभ प्रिमियम क्याण्डीको निर्माताले हालै मेन्थोल क्याण्डी फ्रेसोको नयाँ रिफ्रेसिङ्ग अभियानलाई नेपालअधिराज्य भर प्रस्तुत गरेको छ ।
गुणस्तरीय एवं आवश्यक मात्रामा कच्चा पदार्थहरुको प्रयोग गरी संसारकै अत्याधुनिक निर्माण प्रविधिबाट गरी फ्रेसोको उत्पादन गरिएको छ । मेटालिक र्‍यापरले फ्रेसोको फ्रेसनेसलाई सुक्षित एवं लङ लास्टिङ्ग बनाएको छ । तनाव कम गर्ने, तथा मुख एवं गींजालाई स्वस्थ राख्ने विशेषता भएको फ्रेसो क्यान्डी तथा युक्यालिप्टस् गरी दुइ फ्लेवरमा उपलब्ध रहेको छ । औधषी पसल एवं अन्य किराना पसलमा समेत सजिलै प्राप्त गर्न सकिने फ्रेसोको मूल्य नेपाल अधिराज्य भर केवल रु.१ मात्र राखिएको छ ।
निरन्तर रुपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको लक्ष्मी समूहको एक अभिन्न अंगका रुपमा जया कन्फेक्सनरी स्थापित भएको छ । ३१ वर्षदेखिको अनुभव, गुणस्तरीयता तथा कम्पनी प्रति आम उपभोक्ताहरुको विश्वासको प्रतिफल कम्पनीले नयाँ नयाँ स्वाद अनुसारका कन्फेक्शनरीहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । उपभोक्तहरुको चाहना अनुसारका विभिन्न वेफर, टफी, क्यान्डि, बबल गम तथा वेफरमा आधारित भएर विभिन्न उत्पादन ल्याइसकेको कुरा सर्वविदितै छ । यी मध्ये क्रेभ, कम्पनीको उत्कृष्ट उत्पादन हो भने चोको फन, मिल्क फल्स, वेफी, टि्रङकल, लवबर्डस्, ल्याक्टो फन, बबल फन, म्याङ्गो टार्ट आदि यस समूहका अन्य उत्कृष्ट उत्पादन हुन् ।
अब त कुरा बुझ्नु भयो होला, शैलीबद्ध विज्ञापन गर्ने तरिका !
हल्ला माओवादी संविधानसभा मोबाईल awards सेलेब्रिटी पेट्रोल crisis streets समलिङगी अनुभव hi-life celebrity events festival